Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo safar deg deg ah ku tegay Buulo-Burde - Awdinle Online
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo safar deg deg ah ku tegay Buulo-Burde
Wafdi u Hoggaaminayo Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Hiiraan Cali jeyte Cismaan ayaa Maanta gaaray degmada Buulo burde ee Gobolka Hiiraan, iyada oo halkaasi siweyn loogu soo dhaweeyay.
Wafdiga oo ay qeyb ka yihiin Guddoomiye kuxigeenka Maaliyada Iyo Siyaasada Gobolka Abuukar Sheekh Cabdullaahi Maadey & Saraakiil Ciidan ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha degmada Buulo-Burde kusoo dhaweeyay Mamaulka degmada & qeybaha kala duwan ee Bulshada.
ujeedka mas’uuliyoomtan ay halkaasi u tageen ayaa waxaa lagu sheegay xalinta khilaf xoogan oo u dhaxeeya Guddoomiyaha degmada buulo-Burde Feysal Haajir Aadan iyo Taliska Saraakiisha Ciidamada Jabuuti ee ka tirsan AMIOSM.
Shalay waxaa degmada Buulo-Burde garay Wafdi u hoggaaminayay Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha iyo Dowladaha hoose ee Hir-Shabeelle Maxamed Cali Caadle oo ay kamid ahaayeen Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Hir-Shabeelle.
Guddoomiyaha degmada buulo-Burde Feysal Haajir Aadan oo dhawaan warbaahinta kula hadlay Gudaha degmada ayaa waxaa uu sheegay in Ciidamada AMIOSM ay maamulka ku hayaan faragelin dhinaca Maaliyadda ah, taas oo xoojisay khilaafka u dhaxeeya labada Maamul.
Mas’uuliyiinta uu horkacayo guddoomiyaha Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa waxaa la filayaa inay la kulmaan mas’uuliyiinta Maamulka degmada Buulo-Burde iyo Saraakiisha Ciidamada Jabuuti si khilafka loo xaliyo.
Previous articleKoonfur Galbeed oo faah faahisay Shirka u furmaayo Guddiyada Farsamada
Next articleDoomo si sharci darro ah u kalluumeysanayay oo laga qabtay Xeebaha Soomaaliya